Ukuqonda Isizukulwane Sesidingo vs Isizukulwane Sokuhola | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 22, 2015 NgoMgqibelo, Agasti 22, 2015 Douglas Karr
Abathengisi bavamise ukushintshanisa amagama okufuna ukwenziwa (funa gen) wesizukulwane sokuhola (lead gen), kepha awawona amasu afanayo. Izinkampani ezinamaqembu okuthengisa azinikele zingasebenzisa amasu womabili ngasikhathi sinye. Izinkampani zivame ukuba ne- iqembu lokuthengisa elingenayo ukuphendula kwesidzingo kukhiqizwe izicelo zokuthengisa kanye amaqembu okuthengisa aphumayo ukuzibandakanya kulowo mkhombandlela owenziwe ngokusebenzisa kuholele imisebenzi yokukhiqiza.
Uma ukuguqulwa kungasetshenziswa ku-inthanethi ngaphandle kokuxhumana nenkampani, ukukhiqizwa kwesidingo kubalulekile ekuqapheliseni ukushayela, ukwethembana, kanye negunya ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho. Uma ukuguqulwa kwakho kudinga ukuhlangana kokuthengisa, ukuxoxisana, noma imijikelezo yokuthengisa ende, ukukhiqizwa kokuhola kubalulekile ukukhomba nokuthola umkhondo wokuthengisa ofanelekile okondliwe kuze kube sekupheleni.
Kuyini iDemand Generation
Ukukhiqizwa kwesidingo kuqhuba ukuqwashisa kanye nentshisekelo kumikhiqizo nezinsizakalo zenkampani. Umgomo uku shayela ibhizinisi elivalekile ngokuxhumana okuncane nomthengi noma ibhizinisi olikhangayo.
Endabeni yokukhiqizwa kwesidingo, ungahle ube nolaka kakhulu ekushayeleni ithemba ngomjikelezo wokuthengisa futhi ubathumele ngqo ekuguqulweni.
Yini i-Lead Generation
Ukukhiqizwa kokuhola kuhambisa inzalo noma uphenyo kumikhiqizo noma izinsizakalo. Umgomo yi ukuqoqwa koxhumano olufanelekile ukwakha ubudlelwano nokunakekela kuze kuvalwe njengekhasimende.
Lapho usebenzisa amasu wokuhola, ungahle ube nolaka ekuqoqweni kwemininingwane yokuxhumana ukuze wakhe ukwethembana futhi uzibandakanye nethemba ngokuhamba kwesikhathi. Vele, awufuni ukuphazamisa noma wehlise intshisekelo yomholi ekuvaleni ibhizinisi nawe. Amagoli okuhola kubalulekile - ukuqonda ukuthi ukuhola kulungile yini, kunesabelomali esitholakalayo, kusondele esinqumweni sokuthenga. Imijikelezo yokuthengisa ende, ukuzibandakanya kwezinyathelo eziningi, nokuthengiswa kwamabhizinisi kudinga isu nenqubo yokuhola phambili.
Le nqubo ingahle ifane kakhulu, futhi amasu angahle afane phakathi kwala macebo amabili. Isibonelo, ngingaqhubeka ngiphishekele ngolaka amasu okusesha, ezenhlalo nezama-PR ukwakha ukuqwashisa nokushayela okufunwayo noma okuholayo. Ngingahle ngithole i-infographic noma i-whitepaper esiza ukukhulisa ukuhola noma ngikhuthaze isinqumo sokuthenga. Uma ngizama ukukhiqiza ukuhola, noma kunjalo, ngingagxila kakhulu kubuchwepheshe benkampani nokuthi ukusungula ubudlelwano phakathi kwalezi zikhathi ezimbili kungaba kuhle yini ngamasu.
Impumelelo noma ukukala kungahluka phakathi kwamasu amabili, noma kunjalo. Ngoba funa ukukhiqizwa, Ngingahle ngigxile ekufinyeleleni kokumaketha kwami ​​nasekuguqulweni okuholeleko. Ngoba ukuhola isizukulwane, Ngingahle ngigxile ebuningini bemikhondo yokuthengisa efanelekayo. Ngenkathi iqembu lokumaketha lingabekwa icala nganoma yiliphi isu, yithimba lezentengiso elibhekene nomsebenzi wokuvala ibhizinisi ngecebo lokuhola eliholayo. Ithimba lezokumaketha libhekele ubuningi nekhwalithi yokuhola okunikezwayo.
Tags: funa ukukhiqizwafuna isizukulwane kuqhathaniswa nesizukulwane esiholayofuna kuqhathaniswa nomholiukuthengisa kwangaphakathiukuhola isizukulwaneisizukulwane sokuhola ngokuqhathaniswa nesidingoukuhola kuqhathaniswa nesidingoukuthengisa okuphumayo
Yisiphi isabelomali sokumaketha esifanele njengephesenti lemali engenayo?
Jun 23, 2017 ku-8: 26 PM
Indatshana enhle kakhulu. Siyabonga ngokucacisa umehluko phakathi kwalokhu okubili!